भाइरल मिनिस्टर गोकर्ण विष्टको चर्चा - Dalit Online
भाइरल मिनिस्टर गोकर्ण विष्टको चर्चा
२० मंसिर २०७५, बिहीबार १९:१२
चितवनकी पूजा तामाङ एक वर्षे दूधे बालक च्यापेर साउदी अरबमा दुर्घटनामा परी घाइते भएका श्रीमानको उद्धारका लागि अनुरोध गर्न वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय बुद्धनगर पुगेकी थिइन, मंसिर ६ गते ।
विभागले छलफलका लागि मेनपावर व्यवसायी र पीडितलाई बोलाएको अवस्थामा आकस्मिक निरीक्षणमा पुगे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि ।
नाबालकसहित आएको पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्दैन ? एक महिना किन ? अलिकति भए पनि मानवीयता छैन ? मन्त्री विष्टले पीडितलाई अगाडी राखेर मेनपावरका प्रतिनिधि सँग प्रश्न राखे । मन्त्री र पीडितका अघि मेनपावर व्यवसायी नतमस्तक भए ।
तपाईहरुले कति दिनभित्र पीडितलाई नेपाल झिकाउनुहुन्छ, समय दिनुस, जतिसक्दो चाँडो उहाँलाई नेपाल ल्याउनुस् नभए तपाईहरुलाई कडा कारवाही हुन्छ ! दबेको आवाजमा मन्त्रीसामु एक महिना समय माग गरे,(मेनपावरका प्रतिनिधिले ।
मन्त्रीको यो भनाई सस्तो प्रचारका लागि थिएन् । न त मन्त्री विष्ट पीडितलाई अघि राखेर देखावटी र सस्तो प्रचारका लागि बोलेका नै थिए । उनी बोलेका थिए त ,उही एक वर्षे बालक च्यापेर श्रीमानको उद्धारका लागि गहँभरी आँसु लिइ छलफलमा बसेकी पुजाको रोदन र पीडा देखेर ।
कम बोल्ने, तर धेरै काम गर्ने अहिलेका सबैका प्रिय र चर्चा बटुलेका सबैभन्दा राम्रा मन्त्री हुन् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट । उनको काम गर्ने शैली निकै र फरक प्रखर छन् । अन्य मन्त्री जस्तै मन्त्रालयमै बोलाएर खाजा खर्च टाभ«ल भनेर पत्रकारलाई पाँच सय हजारको खामबन्दी कहिले गर्दैनन् । त्यसकारण पनि उनी ओझेलमा पर्छन् । धेरै मन्त्रीहरुले पत्रकारलाई आफ्नो सस्तो प्रचारका लागि लेख्न लगाएका छन् र लेखिएका पनि छन् । तर सस्तो प्रचारको टिकाउ धेरै दिन हुनसक्दैन ।
२०६७ सालमा बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने उर्जामन्त्रीको रुपमा थिए, गोकर्ण विष्ट । उर्जामन्त्री बनेको समयमा राम्रो काम गरेर प्रशंसा कमाए । उनी त्यही मन्त्री हुन् जसले धेरै सिँहदबारभित्रको शक्तिशाली मन्त्रालय र विभागहरुमा विद्युत महसुल नर्तिर्नेका लाइन काटे । काम नगर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गरे । यतिसम्म कि, लाइन काट्न आफै उपस्थिति भएर अभियान संचालन गरेका मन्त्रीको राम्रो चर्चा थियो उतिबेला पनि ।
जब झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार विघटन भयो ,उनी सिँहदबारबाट बाहिँरिदा भाडाको ट्याक्सीमा बाहिरिएका थिए । विभिन्न आयोजनाका गाडी मन्त्रालय र विभागले तम्तयार गरे पनि उनी व्यक्तिगत इच्छा र लोभ लालचमा कहिले गदैनन् ।
अहिले सात वर्षपछि फेरी मन्त्री भएर सिँहदबार छिरेका विष्ट श्रमिकहरुको अभिभावक बनेका मात्रै छैनन् कि, मजुदर र श्रमिक हुँदै सामाजिक सुरक्षाबाट मुलुकलाई सम्बृद्धिको बाटोमा अघि बढाएका धेरै कथन छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा एकपछि अर्को छलाङ मार्दै. गएका मन्त्री विष्ट ,सामान्य मानिस सरहको जीवन निर्वाहमा समेत निकै ख्याल गर्छन् । उनी चढेको गाडीमा कहिल्यै हर्न बज्दैनन् । उनले पहिले नै अरुलाई असर पु¥याउने काम आफुहरुबाट हुन नहुने भन्दै सबैलाई साइरन र हर्न नबजाउन निषेध गरेका छन् ।
मंगलबार त्यसकै निरन्तरता हाे । कार्यक्रमका लागि ललितपुर जाँदै थिए मन्त्री विष्ट । मंगलबार मात्रै होइन् , उनी प्राय मन्त्री भएपछि जति पनि कार्यक्रममा आउजाउ गर्छन साइरन विना र हर्न विना नै । उनी ट्राफिक नियम उलंघन नगर्ने मन्त्रीको पहिलो सूचीमा पर्छन् ।
धेरै जसो मन्त्रीहरू साइरन बजाएर गलत दिशाबाट चालकलाई गाडी हुइँक्याउन लगाउँछन तर मन्त्री विष्ट अरू सर्वसाधरण जस्तै जाममा रोकिएका धेरै उदाहरण छन । मंगलबार थापाथली चोकमा रातो बत्तिको जाममा बसिरहेको समयमा मन्त्रीको गाडी देखियो । सवारी चालकहरुले मन्त्रीको गाडी लाइनमा देखेपछि कौतुहलता देखाए । त्यही बेला पत्रकार रामेश्वर बोहराको क्यामेरामा गाडी कैद गरे । क्यामेरामा फोटो कैद गरेपछि पत्रकार बोहराले गाडीभित्र हेरे, त्यहाँ श्रममन्त्री बिष्ट रहनु भएको रहेछ । उनले ट्वीटरमा केही शब्दसहित उक्त गाडीको तस्बीर राखेपछि उक्त तस्बीर अहिले भाइरल बनेको छ । धेरैले त्यसलाई रिट्वीट गरिरहेका छन् भने कतिपयले स्क्रिन सर्ट गरेर अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत सेयर गरिरहेका छन । बोहराले ट्वीटरमा लेखेका छन, ‘थापाथलीमा झण्डावाल गाडी लेनमा बसेको देख्दा अचम्म लाग्यो, बाटो खुलेपछि पनि यसले बटुवालाई बाटो छाडिदियो । साइरन, तीब्रगति पनि थिएन । अगाडि पुगेर हेरें, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको गाडी रहेछ !’
प्रकाशित | २० मंसिर २०७५, बिहीबार १९:१२